Qof looga shakisan yahay inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay oo lagu qabtay Turkey - Caasimada Online
Home Warar Qof looga shakisan yahay inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay oo lagu qabtay...
Qof looga shakisan yahay inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay oo lagu qabtay Turkey
Ankara (Caasimadda Online) – Qof lagu tuhunsan yahay in uu ka tirsan yahay Al Shabaab ayaa maanta oo Arbaco ah lagu xiray magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga.
Sida lagu daabacay Wakaaladda Wararka ee Anadolu, oo soo xigatay ilo wareedyo amni ayaa sheegtay in ruuxa la qabtay la ogaaday inuu kooxdaas u qaabilsanaa dalka Kenya.
Waxaa kaloo la sheegay in hawlgalka lagu qabtay ninkaan ay iska kaashadeen booliska dalka Turkiga iyo hay’adda sirdoonka dalkaas (MIT).
Inkastoo hay’adaha amniga ay magaciisa kusoo koobeen A.B. hadana wuxuu heystaa dhalashooyinka dalalka Jarmalka iyo Talyaaniga, waxaana lasoo xiray kadib markii booliska ay warqad kasoo qaateen maxkamadda.
Kooxda AL-Shabaab ee ku xoogan gudaha Soomaaliya ayaa gacan saar la leh ururka AL-Qaacida, waxeyna mar walba weeraro ka fuliyaan Koonfurta iyo Bartama Soomaaliya, sidoo kalana qeybo ka mid ah wadamada dariska ah sida Kenya.